Round Face Cute Tanabe Reiko Gabar Japanese ah 100CM Flat Laab TPE Dolls Dolls
Dolls Galmo Jinsi ah,Caruus galmo fidsan oo jilicsan,Koob caruusadaha galmada ah,2018 iibka ugu fiican 100cm-140cm doll,Caruusadaha galmada caato ah,Doollar Jecel
110cm （B Koobka）
Xun, nool, jecel
Ragdoll, Toy, Qari oo raadso
Ku haboon dad badan:
Aabe weyn, kalinimo, raadinta jacayl
Tanabe taariikhdiisii ​​hore
Tanabe waxay jeceshahay qaansoroobaadyada, bisadaha iyo saloolka. Iyadu waxaa si gaar ah loogu talagalay in ay dhalinyaro ah, cusub oo caato ah, laakiin leh dhadhan dhab ah iyo jinsi. Way kufiican tahay kuwa raadinaya galmo sharci darro ah laakiin wali sharci la'aan ah. Waxay ku habboon tahay da 'kasta oo ay diyaar u tahay inay baarto jihada galmada. Guri u kaxee oo u kaxee qolkaaga jiifka!
Indhaheeda ayaa dhalaalaya; waxay rabtaa inay kula ciyaarto. Haddii aad leedahay rabitaanno kale ama dookhyo kale, waxaad isticmaali kartaa qalab kala duwan si aad u kabto boombalaha oo aad u habeyso faahfaahinta qaarkood. Iyadu waa mid ka mid ah caruusadaha jinsiga noocee ah ee yar yar, laakiin xitaa xirmada noocaas ah, iyadu sidoo kale waa haweeney.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato Tanabe, waad aqrisan kartaa astaanteeda astaanta ama dib u eegista macaamiisha. Eeg sida dadka soo iibsaday Tanabe ay u qiimeeyeen. Iyadu waa caruusad jinsi ah oo aad u qurux badan. Iyadu waa daacad, daacad ah, oo indha sarcaad ah, laga yaabee inay xoogaa wareersan tahay. Waxay dhawaan noqon doontaa saaxiibka aad rabto. Laakiin arrimuhu si dhakhso ah ayey isu beddeli karaan; riyadeeduna waa inay adduunka oo dhan ku soo wareegto. Waxay dareensan tahay in adduunku leeyahay khibrado badan. Nasiib wanaagse, way kula kulantay, diyaar ma u tahay inaad ka caawiso inay ka dhabeyso riyadeeda?
Waxaad ka raadineysaa qolka. Tanabe ayaa ciyaareysa tooygii aad u soo iibisay iyada. Waqtigan xaadirka ah, waxaad ku socotey gadaasheeda, adigoo jilbaha dhulka dhigay, gacmahana ku hareereysan dhexda. Waxay xoogaa u egtahay sidii deero baqay. Laakiin waxyar kadib way is dejisay. "Ma hubtaa inaad rabto inaad tan samayso?" ayay weydiisay dhagteeda. "Ma jirto sabab aad u walwasho. Haddii waqti kasta oo aadan jeclayn waxa dhacay, waxaad ii sheegtaa inaan istaago anigana waan joojinayaa. Waxay aad u rajeyneysaa laabtaada. Weligeed horay uma aysan tijaabin, laakiin aad ayey u Waqtigan xaadirka ah, waxay si tartiib ah u soo qaadatay goonideeda gaaban si ay u muujiso nigiskeeda cad Wadnahaaga ayaa dhoola cadeynaya, kani waa dharka aad ugu jeceshahay. Naasaheeda waa kuwo aad u yar laakiin aad u soo jiidasho badan. Jirkeeda oo siman dameerkeeduna waa wareegsan yahay Maqaarkiisu waa cadaan dabiici ah; marka la barbardhigo sariirta gaduudan ee qoto dheer. Waxay dareemeysaa gariir; waa qaawan tahay, banaantahay oo xiran tahay, waana waaya aragnimo cusub Laakiin waxay ku aamintay adiga, fikradeeda iyo dareenkeedu waa iskudarsanaan filasho iyo cabsi.
Iyadu waa yar yar doll. Xitaa haddii aysan la kulmin jacayl, rabitaankeedu waa mid aad u xoogan. Ma rabtaa inaad la sameysato qoys gacaliso? Waxay rajeyneysaa jacayl qurux badan. maxaad sugeysaa Gurigeeda geeya. Ku noolow macaankaaga.
1.Tanabe waa qaabka ugu iibinta wanaagsan ee 2020 dukaankayaga.
2.Iyadu aad bay u fududahay, markaa waad u dhaqaaqi kartaa meel kasta oo aad joogto.
3.Waxay leedahay waji qurux badan waxayna la kulantaa dhamaan riyadiina.
Jidhkeedu waa mid yar oo ku habboon ururinta iyo kaydinta.
5.Hurkeedu wuxuu ku xiran yahay qalfoof bir ah oo kuu oggolaanaya inaad iska dhigto booska aad rabto.
Liiska xirmooyinka Tanabe:
Dhererka ： 39.4 inji (100cm)
Miisaan ： 28.7 lbs (13kg)
UstDayaanna ： 23.6 inji (60cm)
Dhexda ： 14.2 inji (36cm)
Miskaha ： 23.6 inji (60cm)
Dhererka gacanta: 12.2 inji （31cm）
Dhererka cagaha: 5.5 inji （14cm）
Size xirxirida: 38.6*11.9*9.5 inches(98*30*24cm)
Naasaha yaryar ee casaanka ah Asao Miko 100CM TPE Doll Flat Laabta Wehelkiisa
Magaca astaanta shakhsiga Magaca: Asao Miko Gender: Galmada Dumarka: Dabeecad Adag: Nolol, dambi la'aan, hiwaayado naxariis leh: Ciyaaraha elektarooniga ah, Qurxinta, sameynta jacaylka Shaqada: Jinsiyada Ardayda: Jabaaniis Ku habboon dadka badan: Ururinta, sawir qaadashada, wadaag ...
Laabta Flat Black Indhaha Weyn Japanese Girl Akumi Hakumi 100cm TPE S ...
Magaca astaanta shakhsiga: Akumi Hakumi Jinsiga: Galmada Dumarka: Dhexdhexaad Dabeecad: Caan la'aan, noole, Hiwaayadaha fudud: Xayawaan yar, bakayle, English Shaqada: Jinsiyada Ardayga: Jabaaniis Ku Habboon Dadka Badan: Raadinta Gabdho, Lamaanayaal ...
Cute June Doyle 100CM Madow Weyn Maro Madoow Brown Timo Dheer Flat ...
Sheekada soo socota ee Juun: Waxay noqon doontaa ardaygaaga aan waxba galabsan, kalgacal badan, sidaa darteed baro dhammaan galmada isku dhafan. Maqaarka cirro leh iyo timaha toosan ee madow, waxay u muuqataa mid aan waxba galabsan dharkeeda, laakiin markaad iska bixiso, gabi ahaanba waa dambi. In kasta oo ay iyadu hubaal tahay caruusad galmo heer-gal ah, ha u maleynin ...
XiaoQi - Naaso Qurux Badan Naasaha Siilka Siilka Futada Laba Meelood Oo Cusub TP ...
Haruka - 130CM Laab Yar Slim Xishood TPE Sex Doll
Sheekada asalka ah ee Haruka: Waxaan ahay gabar aad u xun, waxaan raadinayaa nin qancin kara riyadeyda dareenka xun. Waxay yiraahdeen waxaan u muuqdaa mid aan waxba galabsan, laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa in aqoontayda galmada ay ka sarreyso maskaxdaada ugu badan! Waan jeclahay doorka ciyaarta iyo dharka xumaanta. Guriga i geeya, ii oggolow ...